Home Wararka Abaaro iyo biyo la’aan saameeysay kumaan kun oo ku dhaqan Somaliland
Abaaro iyo biyo la’aan saameeysay kumaan kun oo ku dhaqan Somaliland
Somaliland ayaa gashay xaalad deg deg ah, kadib markii xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi ay ku dhawaaqday in abaarta deegaanadaas ay mareyso meel adag.
“Waxaa halkan u soo joogsanay haddii aanu nahay guddidii gurmadka abaaraha in aanu ku dhawaaqno in abaartii meel adag marayso, ka dib markii roobkii gu’gu uu teel teel ku ahaa qaybo kamid ah dalka,” ayuu yiri.
Guddida qaran ee abaarta Somaliland ayaa waxay bilaabeen howlaha gurmadka abaarta iyaga oo qaaday tallaabooyin kala duwan, kuwaasi oo kala ah: Howl-galinta guddida farsamo oo ka kooban wasaaraddaha xubnaha ka ah guddida abaarta iyo hay’adda NADFOR oo daraasad ku sameeyey xaaladda abaarta ee dalka ka jirta guud ahaan, kana soo diyaariyay war-bixin dhammaystiran oo la xidhiidha xaaladda abaarta ee dalka.
Dayactirka iyo kicinta ceelasha dhaadheer ee biyaha kuwaasi oo ay tiradoodu dhamayd 41 ceel, kuwaasi oo ku yaalay goobaha biyo yaraantu ay ka jirto gaar ahaan gobolada Bari. Waxa biyo-dhaamis ay ka bilaabeen booyadaha dawladdu gobolada Togdheer, Sanaag, Sool iyo Maroodijeex.
Waxa hay’adda NADFOR diyaarisay kayd-raashin ah oo loogu talo galay dadka abaartu saamaysay. Sidoo kale waxay ku dhawaaqeen in maanta laga bilaabo cid walba oo doonaysa inay wax ka qabato abaarta dalka ay waajib tahay inay soo marto guddida gurmadka abaarta.
Xukuumadda Somaliland ee Madaxweyne Muuse Biixi ayaa si wax looga qabto xaaladdan waxay u qoondaysay kharash dhan $ 3,000,000 Milyan (Saddex Milyan oo Doolar) oo lagu talogay Raashin, biyo-dhaamis iyo kicinta ceelasha xumaaday.
Previous articleSafiirka cusub Mareykanka ee Soomaaliya oo la kulmay qaar kamida jaaliyadda Soomaaliya
Next articleAl-Shabab Fears Somalia’s Military Court, Judge Says
Hogaamiyaha Jabhada Onlf oo gaaray Magaalada Adis Ababa
Hey’adda OCHA oo digniin horleh kasoo saartay Fatahaada wabiga shabeelle